Cabdullaahi Yuusuf oo majaxaabiyey ololihiisa doorashada madaxtinimada
Ololaha doorashada dalka Mareykanka waxaa dhowaan qalqaliyey xayeysiin la magac baxday Swift Boat oo ay soo saareen niman howlgab ah oo kala qayb galay dagaalkii Vietnam musharraxa xisbiga Dimoqraadiga John Kerry.
Raggan, waxa ay Kerry ku eedeeyeen inuu laayey dad aan waxba galabsan intuu socday dagaalka. Waxa arrintani ay kalliftay in musharraxa dimoqraadigu si dhaqso leh warqad ugu qoro Guddida doorashada, taasoo uu ku weydiisanaayo in la joojiyo Swift Boat.
Saameynta xayeysiintani yeelatay waxaa ka mid ahaa in kalsoonidii Kerry ay hoos u soo dhacdo. Sida ay muujinayso aftida ay wadajirka u sameeyeen CNN, Time iyo Galllup, Bush waxa uu Kerry ka horreeyaa hadda 52%, halka Kerry ka leeyahay 42%. Waxaa dib laga ogaaday in Swift Boat ay diyaariyeen xubno Republican ah oo fadhigoodu yahay Texas.
Toddobaadkan iyo kii ka horreeyey, Cabdullaahi Yuusuf oo ka mid ah musharrixiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxa uu isu adeegsaday Swift Boat. Waxa uu muujiyey inuusan taageereynin hadduu guuleysto ninka uusan isagu jecleyn. Kulankii Soomaalida uu kula yeeshay Sharjah, waxa uu qeexay inuusan soo dhoweynaynin hadduu guuleysto dadka wax bartay ee aqoonta leh.
"Cabdullaahi Yuusuf isagaa isugu filan mucaaradnimo," sidaa waxaa laga soo xigtay inuu yiri nin aqoonyahan ah oo ay aad isu yaqaannaan. Waxa uu Cabdullaahi sheegay inuu xoog ku maquunin doono dadweynaha hadduu guuleysto. Waxaa kaloo uu intaa ku daray inuusan u arag muhiim in Xamar caasimad sii ahaato.
Qodobkan waa kan ay mar kasta soo daliishadaan kooxaha ka soo horjeeda musharraxnimadiisa, waana shakiga shaqsiyan dadku ay ka qabaan. Sidaas darteed, xeeladahaas Cabdullaahi isticmaalay waxa ay u muuqdaan kuwo aan marna shaqeynayn. Ma jiro qof macquul u arka inuu codkiisa siiyo musharrax ballanqaadaya inuu dhiiggiisa daadin doono.
Dad badan waxa ay is weydiiyaan Cabdullaahi Yuusuf jaceylka uu u qabo dhiig-daadinta ma wuxuu kaga dayday oo ka iqtiraacay Adolft Hitler iyo Napoleon Panoporte?
Ninkan, waxa uu caan ku yahay qabiil-ku-gorgortan iyo qabiil-awr-ku-kacsi. Qoraagga buugga Sababaha Burburka Soomaaliya, waxa uu yiri "heerka qabyaaladda Cabdullaahi Yuusuf waxay ku joogsataa kala qaad laba bahood oo ah meesha ugu dambaysa ee qabyaaladdu ku istaagto."
Lixdii sano ee uu hortaagnaa Puntland xukunka ka jira waxa uu ahaa mid jabhadeed. Puntland, waxa ay eedday lix sano oo ay ku hoos jirtay calaacasha Cabdullaahi Yuusuf, dowladda keliya ee jirtaana ay ahayd isaga (one-man show Presidency). Waxaa kaloo uu caan ku yahay inuu mar kasta maamulka siyaasadeeyo.
Inkastoo uu yahay nin askari/jabhad ah oo aanan ku dhaliili karin muxuu doorashooyin local ah uga qabanqaabin waayey Puntland, sida Somaliland oo kale haddana runtu waxay tahay inuusan dhisin haykal maamul. Xitaa hal instutition uma dhisin dhulkuu xukumayey.
Maalin walba waxaa Puntland laga soo sheegayaa abaar, iyadoon la ogeyn daqliga canshuuruhu meeshu uu maro. Weliba Puntland waa gobolka labaad ee Soomaaliya ku yaalla ee hay'adaha samafalka u ah gabbaadka, marka laga reebo Somaliland. Dadka eedeeya waxay yiraahdaann dhaqaalihii maamulkiisa wuxuu u adeegsaday Spesso Politico.
Wasiir ka tirsan maamulkiisa ayaan hadda ka hor weydiiyey sababta ay u sameyn kari waayeen tirakoob (consensus) iyo doorashooyin hoose (local elections). Waxa uu iigu jawaabay "Cabdullaahi hadduu doorashooyin oggolaado, wuxuu ka baqanayaa cid isaga ka wanaagsani inay soo baxdo, wax walbana wuxuu ka hormarinayaa ilaalinta kursigiisa, sidaas darteed ma oggola broad-based scheme ee isagaa wax walba isku koobaya."
Waxa uu intaa ku daray "Haddii nin masuul ahi gacantogaaleeyo malaayiin dollar ma daneeyo, haddiise hal siyaasi hadal ku kululeeyo weligii waa gocdaa. Waa nin dadka hadalka ku maaga, haddii loo jawaabana aan dulqaad yeelan."
Waxaan xusuustay hadalladii Maxamed Cabdi Xaashi oo ah ku xigeenkiisa oo yiri "Puntland waa Cabdullaahi, Cabdullaahina waa Puntland." Waxa ay tani iga shaafisay inaan is weydiiyo halbeegga Cabdullaahi wax ku maamulo.
Waagii aan annagoo xayn weriyeyaal ah oo isugu jirna Soomaali iyo Mareykan booqannay Puntland bishii December 2001 ayaa dareenka dadweynuhu waxa uu u badnaa �yaa talow idin ka horwareejiya odayga?�
Raggii maalintaas ay is raacsanaayeen waxaa ka mid ahaa Cabdishakuur Mire Aadan Cobol, Faarax Duxa-joog iyo Ibraahim Cartan Faarax (Xaaji Bakiin). Saddexdoodii maanta ninna lama safna Cabdullaahi.
Waxyaabaha hadda shakigu ka jiro waxaa ka mid ah sababta uu xilka u wareejin la� yahay, taasoo dad badan u fasiraan inay tahay xeesha kama dambaysta ah ee uu rabo inuu ku gorgortamo.
Waxaa mudan in la is weydiiyo halbeegga lagu soo xuli karo Cabdullaahi Yuusuf. Sidee xilka looga qaadi doonaa haddii Madaxweyne loo doorto maadaama uu yahay nin ku caan-baxay inuusan aqbalin rabitaanka dadka "will of the people."
Yaa damaanad-qaadaya inaan dhiig ku daadanayn sidii Maxamed Siyaad Barre oo kale "qori-caaradiis ayaan ku qabsaday, qori caaradiis ayaana la igaga qaadi karaa."